Mလုလင်နောက်က လိုက်ခြင်း(မင်္ဂလာနှစ်ပါတ်လည်အမှတ်တရ) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
My Dear Diary » Mလုလင်နောက်က လိုက်ခြင်း(မင်္ဂလာနှစ်ပါတ်လည်အမှတ်တရ)	30
- ko pauk mandalay
Posted by ko pauk mandalay on Jul 2, 2012 in My Dear Diary, Photography | 30 comments
ကျနော်တို့ ရွာကအလှူပန်းတနော်ပွဲကို လိုက်ဘို့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ရောက်တဲ့နေ့မှာဘဲ လုလင်နဲ့ကျနော် ကန်တော်ကြီးဘက်ဓါတ်ပုံရိုက်ထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်မှာ တူညီတဲ့စိတ်က ဓါတ်ပုံရိုက်သွားမယ်ဆို ချက်ခြင်းသွားဖြစ်တာပါ။
ဟိုရောက်တာနဲ့ အဲဒီနားက ဆိုင်မှာ ထမင်းကြော်စား။
ကရ၀ိက်ရယ် ငုရယ် စိတ်တိုင်းတွေကျ။
ဘွန်ဇိုင်းအပင်တွေကြားထဲမှာ ကျနော်ကို ဓါတ်ပုံရိုက်.။
အဲဒီလိုရိုက်နေတုန်း သူက သူ့မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းလေးပြောပြပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန် ဓါတ်ပုံတွေ စပါယ်ရှယ်ရိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ့။
ဒီကန်တော်ကြီးထဲက စိန်ပန်းပင်တပင် အပွင့်တွေရဲရဲတောက်လို့လှပ။
သူတို့ မောင်နှံက အဲဒီနေရာလေးမှာ ရိုက်ခဲ့တာလေးကို သူသတိတရနဲ့ပြန်ပြောပြ။
အဲဒီအပင်လေးက ကျနော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာ အပွင့်မရှိတော့၊
သူတို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ရက်က ဇူလိုင်လ 2ရက်နေ့။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျနော့်မွေးနေ့ကဇူလိုင်လ 3ရက်နေ့။
ဟိုတစ်ရက်က ပုံမတင်တာကြာတဲ့ လုလင်က ဓါတ်ပုံလေးတွေတင်လာပါတယ်။
သူနဲ့ကျနော်ကွာခြားချက်က ပုံတင်တာ သူက ခပ်ကျဲကျဲ။
ကျနော်က ရောက်တဲ့နေရာ ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့လက်ဆော့တော့ နေ့တိုင်းတင်.။
သူအပါအ၀င်မိတ်ဆွေအချို့က အဲလောက်မတင်ဘို့ အကြံပေးပါတယ်။
ကျနော်က တော့ မျဝေပေးချင်တဲ့ စိတ်တစ်ခုသက်သက်နဲ့နေ့တိုင်းတင်။
သူထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်မီးတောက်ပုံလေးပါတာ အရမ်းသဘောကျမိပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပြီးခဲ့တဲ့ ဥပုဒ်နေ့က ရွှေကျီးမြင်ဘုရားကိုရောက်အသွား၊
ဘုရားပူဇော်ထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်မီးလေးက လေအဝှေ့မှာ သွဲ့သွဲ့နွဲ့နွဲ့။
အဲဒီမာ ကျနော်တတ်သလောက်မှတ်သလောက်နဲ့လက်ဆော့ ခဲ့ပါတယ်
အိမ်ပြန်အရောက်ကွန်ပြူတာထဲထည့်ကြည့်တော့ လှသလိုလို မလှသလိုလို။
Mလုလင်နောက်က လိုက်ခြင်းဆို နာမယ်ပေး။
ပြန်တွေးကြည့်တော့ မဝေးတော့တဲ့ရက်ကလေးမှာ သူတို့ရဲမင်္ဂလာနှစ်ပါတ်လည်လေးဆိုတာသတိရမိတော့
ကျနော်ဖယောင်းတိုင်မီးတောက်လေးတွေက အတတ်ပညာမရှိတဲ့ ကျနော်လက်ဆော့တာကြောင့်
ဖယောင်းတိုင်မီးရောင်လေးက အလင်းတွေပေးဝေနေတဲ့ အင်အားကိုမြင်မိသလိုလို။
လက်တွဲမဖြုတ်စတမ်း မင်္ဂလာနှစ်ပါတ်လည်ပေါင်းများစွာကို ကြုံဆုံနိုင်ပါစေလိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ၏
About ko pauk mandalay
ko pauk mandalay has written 1118 post in this Website..
ကိုယ်တိုင်ရော သူများ ပါ စိတ်အပန်းပြေစေဘို့ စာရေးဓါတ်ပုံတင်ပါတယ်။
စာရေးတယ် ပုံတင်တယ်ဆိုတာ ကျနော့် ဘ၀ကြီးထဲက အစိတ်အပိုင်းလေး တစ်ခုပါဘဲ။
ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့သူက သူများ ရိုက်ထားတဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီးပုံလေးနဲ့နေခဲ့တာကြာပေါ့။
မလှပေမယ့် ကိုယ့်လက်ဖြစ်ပုံလေးဆိုတော့ .............
View all posts by ko pauk mandalay →	Blog
ရဲစည် says: မျှဝေပေးတဲ့ အဲ့ဖယောင်းတိုင်လေး ငြိမ်းသွားချိန် မီးစာမဲမဲလေးနဲ့ မီးခိုးဖြူလေး အူနေတဲ့ပုံလေးပါ ထပ်ထည့်ပေးရင် လွှတ်ကောင်းမည် ထင်ကြောင်း……
အားပေးသွားပါတယ်ဗျို့ ဒိထက်မက လက်ဆော့ နိူင်ပါစေ သတည်း ….
လေးပေါက်လဲ သက်တမ်း ၃ပုံ ၁ပုံ ကျိုးသွားပီ……………………………
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2033
ကိုရင်မောင် says: Mလုလင်တုိ့ဇနီးမောင်နှံ ယနေ့ မင်္ဂလာနှစ်ပါတ်လည်မှ သည် ရာသက်ပန် သက်ထက်ဆုံး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1474
Mလုလင် says: အစ်ကို – ကိုရင်မောင် ရေ .. ကျေးဇူးပါဗျာ။ ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ ပြည့်ရလို ပါတယ်ဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8410
ဆူး says: ကိုလုလင် တို့ ဇနီးမောင်နှံ ပထမ မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်မှသည် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းသင်းနိုင်ပါစေ။
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပြီး စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေး က အစ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀ ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ဆီမီး တန်ဆောင် အလင်းရောင်
ကိုပေါက် ထွန်းလို့ လင်းစေသောဝ်
လုလင် နဲ့ ချစ်ဇနီး လှလှလေး
အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းနိုင်ရေး
ဆူး မှ တဆင့် ဆုတွေပေး။
ကာရံ ကိုက်မကိုက်တော့ မသိဘူး.. ရမ်းရေးလိုက်တာ.. မကိုက်တော့လည်း ကိုက်အောင် ဖတ်လိုက်နော်.. ဟိဟိ..
Mလုလင် says: မ ဆူး ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ။ မကိုက်တဲ့ ကဗျာ ကိုပဲ .. အမှတ်တရ သိမ်း ထားပါ့မယ်ဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1297
ရွာစားကျော် says: မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့က ဘယ်နေ့ပါလိမ့်ဗျာ..
မေ ၁ အလှူ Mလုလင်တို့ အိမ်ရောက်တုန်းက မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ပုံးတွေ မဖောက်ရသေးတာမှ အများကြီး ကျန်နေတာတွေ့တယ်..
မှတ်မိသလောက် အိမ်ထောင်ကျတာ ရှစ်လလောက်ရှိသေးတယ် Mလုလင် ပြောခဲ့သလားပဲ.. ကျနော် အမှတ်မှားရင်လည်း မှားမှာပေါ့
ပျော်ရွှင်သော မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်လေး ဖြစ်ပါစေ Mလုလင်ရေ…
Mလုလင် says: အစ်ကိုရေ .. အမှန်ကတော့ မနေ့ တနေ့ကလို ပဲ လို့ ကို ထင်နေတာပါ။ (တိန်..တိန်..:mrgreen:)
ကျေးဇူးပါအစ်ကို ရေ … နေပြည်တော် ဘက်ရောက်ရင် ၀င်ခဲ့မယ် … ချင်းရွာဘက် လိုက်ပို့နော့ … 8-)
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8315
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မင်္ဂလာနှစ်ပါတ်လည်နေ့က
ရွာစားကျော် says: ကျနော်တို့က မေ- ၄ ရက်နေ့က (၄) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါတယ် လေးပေါက်ရေ
အလှူအလွဲတွေအကြောင်း အပိုင်း(၁) မှာ ကျနော် ပြောခဲ့သေးထင်ရဲ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8315
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နောက်နှစ်မေကျရင် ရွာစားကျော်နောက်က အသေအချာလိုက်မယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1831
Khaing Khaing says: ကိုMလုလင်နှင့် ဇနီးမောင်နှံသည် ယခုမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နှင့် သားသားမီးမီးလေးတွေများစွာ မွေးဖွားနိုင်ပီ ပျော်ရွင်စွာပေါင်းဖက်နေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလျှက် ……
မနေ့ကတည်းကပို့စ်တင်မလို့ လိုင်းမကောင်းလို့မတင်ဖြစ်ဘူး အခုလေးပေါက်ကအရင်တင်ပီး ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးထားတော့ လေးပေါက်အောက်ကပဲ မန့်ပေးလိုက်ပါတယ် ………
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1779
မွန်မွန် says: ဟိုတလောက လေးပေါက်ပြောထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကို လက်ဆော့ထားတယ်ဆိုတာကို သတိရနေပါသေးတယ်…
နံပါတ် ၆ နဲ့ ၁၈ ကို ကြိုက်တယ်…
ကို Mလုလင်တို့အတွက် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ဖြစ်ပါစေ…နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အေးချမ်းပျော်ရွှင်သောမိသားစုအဖြစ် နေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2295
htoosan says: Mလုလင် နှင့် မဒမ် Mလုလင် တို့၏ မင်္ဂလာ နှစ်ပါတ်လည်မှသည် သားသားဂျုနီယာMလုလင် မီမီးMလုလင်တို့စုံညီစွာဖြင့် နှစ်ပါတ်လည်ပေါင်းများစွာကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။
လေးပေါက်ကိုလည်း မနက်ဖြန် အကယ်၍ ၇ွာထဲ ၀င်မရခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ မွေးနေ့ကြိုဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လို့ ကိုပေါက်အတွေးပါးပါးလေးများနှင့် ကိုပေါက်ရဲ့ စနက်ရှော့မဟုတ်တဲ့ လက်ဆော့များ နှင့် မျှဝေ နိုင်ပါစေ။။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7118
etone says: လေးပေါက်ရေ .. ဒီနေ့ လေးပေါက်မွေးနေ့ပဲ ..
မထင်မှတ်ပဲ သိခွင့်ရတော့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေး တောင်းပေးခဲ့ပါတယ်နော် ။
ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ။ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ထပ်တူကျလို့ အောင်မြင်တဲ့နေ့ရက်တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ။ ကိုလုလင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို ဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။
mamanoyar says: ကိုလုလင်တို့ မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ကျော့် မဂါဆောင်ကျရင်လဲ ပေးဝေခြင်းရှိုပီး ဘီအီးပုလင်းလေးတွေကို ဒေါင့်မျိုးစုံက ရိုက်ပြပေးပါဦးနော်..
ဆရာလုရေ..မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် အလှူ မလာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီပို့ စ်ထဲကပဲ အားပေးသွားပါတယ်ဗျား..
မနက်ဖြန် ကျရောက်မဲ့ အုပေါက်မွေးနေ့ အတွက်လဲ ခုကတဲက ဟပ်ပီးဘတ်ဒေး လုပ်ထားလိုက်မယ်နော်..
မနက်ဖြန်ကျမှ လာထား ၁၅ကျပ် ရှိုပြီး ဟပ်ပီးဘတ်ဒေး ထပ်လာမယ်..ဂိန်..
water-melon says: ယခုနှစ်ပတ်လည်နေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ
လေးပေါက် နက်ဖြန် လေးပေါက်မွေးနေ့နော်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 10130
မောင်ပေ says:ွှအပေါ်ဆုံးပုံကနေ အောက်ကို
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 919
Novy says: ပေးဝေခြင်6းရဲ့ မီးတောက်ထဲမှာ
နဖူးပြောင်ပြောင်နဲ့ ကုတ် အနတ်ရောင်ဝတ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ပုံပေါ်နေတယ်
ပေးဝေခြင်း 17/18/19 မီးစာက နဂါးပုံလေးဖြစ်နေတယ်
မတူတဲ့ အမြင်လေးနဲ့ ကြည့်လိုက်တာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1674
shwe kyi says: ဦးပေကတော့ ကြံကြံဖန်ဖန်ကြည့်တတ်တယ်။ ဦးပေပြောသလိုလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5476
MaMa says: မောင်လုင် နဲ့ မယ်လုင်တို့ရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာရက်မြတ်မှသည် နှစ်ပေါင်း၁၀၀တိုင်အောင်
အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းများ ခြံရံ၍ သာယာဖြောင့်ဖြူးသော ဘ၀လမ်းတွင်
ရွှေလက်မြဲမြဲတွဲနိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အစက ဒီပုံလေးကို သတ်သတ်တင်မလို့။
နောက်မှ လုလင်အမှတ်တရဆို တင်ပေးလိုက်တာ။
etone နောက်ကလ လိုက်ခြင်းလာမယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1692
char too lan says: ဆန်ဒကို ဖော်ထုတ်နေတာလားလေးပေါက် ????
အားလုံးအေးဆေးဖြစ်နေပါပီလေးပေါက်ရယ် … စိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့နော် :D
တူမောရိုး ဆို ဟက်ပီးဘက်ဒေး ဒေါ့မှာနော်
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွား ရိုက်နိုင် နှက်နိုင်ပါစေ ခညာ………..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: etoen နောက်ကလိုက်မှာက အမိူက်ပုံးပျောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့လိုက်ရမှာ
etone says: တို့လေးပေါက်ကြီး … တူမနာမည်ကို မှန်အောင် မပေါင်းတတ်တော့ပါလားကွယ် … တော်ပြီ တော်ပြီ စိတ်နာတယ် … ခဏအိပ်လိုက်ဦးမယ် … ဟိဟိ :P
ဖိုးထောင် says: ဟင့်အင်း.ဟင့်အင်း.အူးပေါက် အီးတုံးနောက်က မလိုက်ရဘူး ဒါက အမျိုးသမီးအိမ်သာလေ အဟင့်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1558
nozomi says: ကိုပေါက်ကြီး မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ခင်ဗျာ
လုပ်ချင်တာတွေ ကို လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
ကျန်းမာ ချမ်းသာ လို့ မိသားစု ဆွေးမျိုး အပေါင်းအသင်းများနဲ့ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1426
Ma Ei says: မင်္ဂလာနှစ်ပါတ်လည်မှသည်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျေးဇူးပါကိုနိုရေ မုန့်ပြင်ထားတာဝင်စားလိုက်အုံးနော် အမုန်းဆွဲသွား
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တေးကလုံရေ
etoen တဲ့ ဆောဒီး ညကြီးမင်းကြီး မမြင်မစမ်းနဲ့ရိုက်ရလို့ပါအေ။
Comments By Postမေမေရဲ့ Hand Make Wine - kyeemite - TNAဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အထ္ထုပ္ပတ္တိ အကျဉ်း နှင့် ရရှိခဲ့သော ဆုများ - kyeemite - မင်းမင်းပျောက်ဆုံးနေသော နောက်ဆုံးခြေရာ - ညလေး - သျှားသက်မာန်ကဗျာချစ်သူ များ ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ် (၃) - KZ - သျှားသက်မာန်ကေဇီ ရေနွေးဖြစ် - TNA - KZ၂၀၁၅ခုနှစ် ဘာမားစပရင်း ဒိုင်းလုပွဲဖိုင်နယ် - မင်းမင်းမိုးပြာပြာသို့ မေတ္တာစာ - သျှားသက်မာန် - အလင်း ဆက်မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်နဲ့ အရွယ်ရောက်လူ အကုန်သိတယ် ... :P - TNA - ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်MPU ---- EASi - Khaing Khaing - Khaing Khaingသာယာတင့်တယ် - TNA - မင်းမင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - TNA - TNAအာစရိယ ငါးခုံးမ - မင်းမင်း - သခင် mobileအမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ကို ဒီ လို ထပ် ဖြည့်ကြည့် ရင် မကောင်း ဘူး လား။ - ကို ငြိမ်းမောင် - KZပို မြင့်မြတ်တဲ့ကူညီမှု / ပို ထိရောက်တဲ့ ကူညီမှု ကို...... လိုအပ်နေကြတယ် ။ - အလင်း ဆက် - Ma Maဂီနဲ့ ထွီ ခုမှတွေ့ဒါ - ကြက်အူလှည့် - Crystallineဦးတေဇပြောသော..Team Work - သခင် mobile - ကြက်အူလှည့်အာကာသစခန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ - မင်းမင်းဘာစားရမှာလဲဟင်…. - တိမ်မည်း - TNAလေထဲတွင်လွင့်ပျံ့ခဲ့သော လွင့်ပျံ့နေဆဲဖြစ်သော - KZ - ko pauk mandalayDr.ခင်လတ်နှင့် သူ၏ဖခင် - မင်းမင်း - ကြက်အူလှည့်မဲရုံသို့လာ မဲပေးကြပါဦး (ဖတ်/ရွေး၊ ဧပြီ+မေ) - ချစ်စ/ဆရာ - ၀င့်ပြုံးမြင့်အုတ်တိုင် အောက်ကနေ စုတ် ကိုင် စောင့်နေမယ် - ကြောင်ဝတုတ် - ဦးကြောင်ကြီးကရင်စည်သွပ် စွံပီ law - Crystalline - Foreign Residentကျနော်သိတဲ့ ကျားမေမေ - ကြက်အူလှည့် - ကြက်အူလှည့်ဘ၀ဆိုတာ (၂/၂၀၀၈) - Ma Ma - ဦးကြောင်ကြီးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (79051 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70611 Kyats )naywoonni (68478 Kyats )weiwei (67679 Kyats )zaylay (67079 Kyats )cobra (62631 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (61265 Kyats )MaMa (59999 Kyats )Top Posts & Pagesအမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဆိုတာ ကို ဒီ လို ထပ် ဖြည့်ကြည့် ရင် မကောင်း ဘူး လား။